Nchịkọta ihe ntanetị nke YouTube
Etu ị ga - esi wepụta thumbnail Youtube
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 16, 2015 Tuzdee, Machị 15, 2016 Douglas Karr
Enwere ike iwepụta thumbnail maka vidiyo Youtube? Ee! Ọ bara uru iji gosipụta thumbnails na njikọ na sidebars, ma ọ bụ iji dochie koodu koodu Youtube na vidiyo n'ime ndepụta RSS ma ọ bụ email gị. Nke a bụworị atụmatụ nke ụfọdụ nyiwe email, dị ka WordPress Akwụkwọ Akụkọ Plugin. Gbalịrị ide Youtube thumbnail generator nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ.
Ozi ọma ahụ bụ na ịnweghị ịwapụta thumbnail, Youtube nwere ọtụtụ na-eche gị.
Nke a bụ vidio vidiyo - rịba ama vidiyo vidiyo?
Lee foto ndị a na di na nwunye nha na okpokolo agba, rịba ama vidiyo id na-agbakwunyere na URL:
Easyzọ dị mfe iji tinye thumbnails n'akụkụ gị ga-abụ iji tinye URL ihe oyiyi na aka gị dị ka Omenala ubi, wee hazie isiokwu gị ka ọ gosipụta mpaghara omenaala ma ọ bụrụ na ọ dị.
Tags: nweta youtube thumbnailthumbnailfoto youtubenlele youtubeyoutube sidebarwijetị sidebaryoutube tọmbneelụ
Wzọ isii iji bulie Social Media maka Azụmaahịa Omume
Jun 22, 2010 na 6:26 AM
Doug, ejighi m n'aka na m doro anya n'ihe ị na-ekwu ebe a. Enwere m ike iji njiri mara. Are na-ekwu na ị nwere ike were YouTube vidiyo vidiyo gị ma tinye /0.jpg na ya ka ị nweta thumbnail? Nke a ọ bụ ike onyonyo?
Ihe nlere gi ghari na /2.jpg. Nke ahụ ọ bụ etiti 2? Kedu ihe 0, 1 ma ọ bụ 2 na-anọchi anya ya? Kedu elu ị ga-aga?
Ndo maka ajụjụ niile mana nke a kpaliri mmasị m. Daalụ!
Jun 22, 2010 na 9:28 AM
Mba, ị gaghị enwe ike ịgbakwunye ngwa /0.jpg - rịba ama subdomain ma ụzọ dị iche. Mba, onyogho a anaghị agbanwe agbanwe, ọ dị otu ebe. Amaghị m ihe ọnụọgụ ahụ na-anọchi anya mana 0 bụ nnukwu onyonyo, 1 na 2 dị ka obere onyogho ndị sitere na okpokolo agba dị iche iche.
Mee 16, 2011 na 12: 51 AM
Naanị ịchọrọ ịkele ekele maka nke a! Emegharịrị m koodu m na ntụnye gị wee rụọ ọrụ.
Jul 30, 2011 na 5: 45 AM
Amamihe, naanị ihe m na-achọ. Obi ebere na thumbnails bụ naanị 120 × 90
Sep 25, 2011 na 8: 08 AM
Ndewo Ben! Daalụ maka ịkwụsị site… ma ọ bụrụ na ịlele 0.jpg, ogo ya bụ 480px site na 360px.
Sep 25, 2011 na 6: 59 AM
Daalụ, ọ dị mma.
Sep 28, 2011 na 2:35 PM
Ihe omuma a! daalụ nke ukwuu!: D
Sep 28, 2011 na 2:42 PM
Bet nzọ Delia!
Ọkt 17, 2012 na 4:03 AM
Daalụ maka nke a. BTW, anyị nwere ike ịkọwa obosara na ịdị elu nke ihe oyiyi ahụ?
Aug 16, 2015 na 3:27 PM
O di nwute, mba. YouTube na-esetịpụ ịdị elu na obosara na-akpaghị aka.
Mee 5, 2016 na 12: 58 PM
Chei, ọ mara mma! echeghị banyere ya.